सिद्धार्थ राजमार्ग छेउका घर भत्काउने बिषय के हो ? – Palpa Samachar
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्र्तगत चिडियाखोलादेखि राम्दीसम्मका करिव ७ सय बढी घरहरु भत्काउने तयारी छ । सडक मापदण्ड बिपरित बनेका यी घरहरु भत्काउन लागि सडक डिभिजन कार्यालय लागिपरेको छ । पहिलो चरणमा नाप जाच गरि कुन घर कति भत्किन्छ भन्ने बिषयको लेखा जोखा गरिसकेको कार्यालयले सार्वजनिक सुचना जारी गरि सडक मापदण्ड बिपरित रही भत्किने घरहरु एक हप्ताभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यस लगत्तै माइकिङ समेत गरिएको छ । माइकिङ मार्फत घर खाली गर्न वा आफैले भत्काउन अपिल गरिएको छ । यो सूचना जारी भएपछि सडक छेउका घरका मानिसहरुलाई निद्रा लागेको छैन भोक लागेको छैन । कति बेला घरबार बिहीन भइने हो भन्ने चिन्ताले पिरालिरहेको छ ।
हुन त सडक मिचेर बनेका घरहरु राख्नुपर्छ वा भत्काउनु हुदैन भन्न उचित हुदैन । किनकी मानिसहरुको चाप र सवारी चापका कारण सिद्धार्थ राजमार्गमा घण्टौसम्म जाम हुने समस्या छ । तर राजमार्गको सवालमा यसअघि पटक्कै काम भएको छैन । सामान्य खाल्डाखुल्डी समेत पुरिएका छैनन् । बजेट आएको छ, टेन्डर भएको छ तर उपलब्धी सडकमा देखिदैन । यसबारे ब्यापक रुपमा जनगुनासो छ । जावो खाल्डा समेत पुर्न नसक्ने डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी कुन मुख लिएर घर भत्काउन आउलान् भनेर स्थानीयहरु कुरिबसेका छन् । यसको अर्थ यो पनि हो कि भत्काउनेमा मात्रै चासो दिने कार्यालयले किन कहिल्यै बनाउनेमा ध्यान दिएन ?
अर्कोतर्फ सडक भत्काउदै गर्दा कति मानिसहरुका घर बार बिहीन हुदैछन् । कतिका नजिक वा पछाडि घर बनाउन मिल्ने जग्गा छ भन्ने कुराको पहिलो आकलन हुन जरुरी छ । घरबार बिहीन भएकाहरुलाई कहा कसरी राख्ने त्यसमा सरकारको दायित्व के हुने भन्ने बिषय महत्वपुर्ण हो । तिमीहरुले सडक छेउमा घर बनाएका थियौ, त्यही भएर भत्कियो अव जहा“ जाने जाऔं भनेर पक्कै पनि सरकारले भन्न मिल्दैन होला । त्यसैले राहतको प्याकेट र पुर्न निर्माणमा सरकारको भुमिका पनि पहिल्यै आउन जरुरी छ । तयारी पुरा गरौं, त्यसका लागि पर्याप्त छलफल र अन्र्तक्रिया गरौं । कुरा के हो सबैलाई प्रष्ट गराऔं अनि बल्ल घर भत्काउने तिर लागौं । त्यसो भयो भने जनताले सरकार हाम्रा लागि छ भन्ने कुराको महसुस गर्नेछन् । हचुवाको भरमा जनता रुवाउने काम नगरौं ।
पाल्पा समाचारपत्र बर्ष १० अंक ३५ को सम्पादकीय
धुलाम्मे सडक, स्वास्थ्यमा नराम्रो असर